” သေ ပြီ ဆ ရာ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ” သေ ပြီ ဆ ရာ “
” သေ ပြီ ဆ ရာ “
Posted by ခင်ခ on Jul 22, 2014 in Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 16 comments
” သူငယ်ချင်း ဘာမှ မစားဘူးလား မှာလေကွာ လဘက်ရည်နဲ့ဆို ဆာမှာပေါ့ ”
” ငါက ထမင်းကြမ်းနဲ့ပဲပြုတ်ဆီဆမ်း မနက်က အိမ်မှာစားလာသေးတာကွ၊ ငါတို့က နယ်သားတွေဆိုတော့ မနက်ဆိုလည်း ထမင်းကြမ်းနဲ့ ပဲပြုတ် ဒါမှမဟုတ် အကြော်နဲ့ စားလိုက်ရမှ နေ့လည်စာလည်း ထမင်းဘဲ အားရပါးရစားလိုက်ရမှာ တင်းတိမ်ကြတာလေ ”
” ဒါဆို မင်းတို့ မိသားစုက ထမင်းကို မိန်ရေယှက်ရေ စားကြတယ်နဲ့တူတယ်နော် ”
” ဟုတ်တယ် ငါ့အဖေရော အမေရော ငါနှမလေးရော နဲ့ ငါက ထမင်းဘဲ အပြတ်အ၀တီးကြတာ အခြားသရေစာ မုန့်တွေကို စားခဲတယ်လေ ထမင်းမစားဘဲ ခေါက်ဆွဲကြော်တို့ ဘာတို့ အဲလိုအခြားဟာ စားဖြစ်ရင် သိပ်မကြာ ဘူး ပြန်စာသလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ထမင်းလေကို ဆီစမ်းနယ်ပြီ မြေပဲဆံနဲ့ပြန်စားလိုက်ရမှ အာသာ ပြေသဗျ တောသူ တောင်သားမျိုးရိုးဆိုတော့လည်း ငါငယ်ငယ်ရွာမှာတုန်းက အကြော်ကလွဲရင် အခြားမုန့် စားစရာ ရှားတော့ ထမင်းဘဲ အားပြုစားခဲ့ရတာလေ အခုလည်း ထမင်းမှ ထမင်းဘဲ မက်တယ်လို့ပြောရတာပေါ့ဗျာ ”
” မင်းတို့အတွက် ထမင်းက အဓိကဖြစ်တာပေါ့လေ ”
” ဟ ထမင်းဂျိုင့်မှာ ထမင်းက နှစ်ဆင့်တောင်ပါလား အတော်အစားပုတ်တာဘဲနော် ”
” ဟာ မင်းကလည်း ဒီနှစ်ဆင့် ထမင်းထည့်လာတောင် တစ်ခါတလေ မ၀ချင်ဘူးလေ ”
” အင်း ထမင်းအတော်စားနိုင်တာဘဲလေ ”
အဲဒီလိုပါဘဲ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိက စိုက်ပျိုးထွက်ကုန်ဟာ ဆန်စပါးဖြစ်ပြီး မြန်မာတို့ရဲ့ အဓိက စားကုန်ကလည်း ထမင်းဖြစ်ပေသည်။ ထို ထမင်းကို ဟိုရှေးရှေးပဝေဿဏီ ကျုပ်တို့ ဘိုးဘွားလက်ထက် မတိုင်မှီထဲက ကျုပ်တို့တိုင်းပြည် ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေ စားခဲ့ကြတာ အခုလည်း အဲဒီထမင်းဘဲ အဓိကစားကြ သလို နောင်လည်း ထမင်းဟာ အဓိကစားသောက်ကုန်အဖြစ် ကျုပ်တို့တွေ စားနေကြမှာကတော့ မလွဲဧကန် ပါဘဲလေ။
မြန်မာတွေ ထမင်း အရင်ကလည်းစားခဲ့ကြသလို ခုလည်း ဒီတိုင်းပြည်မှာ လူတိုင်းနီးပါး စားနေကြတယ် နောင်လည်း ဒါဘဲအဓိကစားမှာကို အဆန်းလုပ်ပြီပြောနေသေးတယ်လို့ ဆိုကြမယ်ထင်ပါတယ်၊ ဆိုလည်း ဆိုသင့်တာကိုး မြန်မာတွေ ဒီတိုင်းပြည်ကသူတွေ ထမင်းစားတာ အဆန်းမှမဟုတ်တာလေ။
ဒါပေမယ့် ကျုပ် မနေ့က သတင်းစာထဲမှ HEALTH ကဏ္ဍလေးမှာပါတဲ့ ဆောင်းပါးလေးက ဆန်းသွားလို့ ထမင်းစားတာကို အဆန်းလုပ်ပြောဖြစ်သွားတာလေ။ အဲဒီဆောင်းပါးလေးကို အကျဉ်းခြုံပြီး ပြန်ပြောရရင်တော့ ဒီလိုပါဗျ။
ဆန်တွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသော အာဆင်းနစ်ပါဝင်မှု နိုင်ငံတကာအစိုးရများထိန်းချုပ်မည် ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်နဲ့ မန်းက ရတနာပုံသတင်းစာမှာ TMK ကဆောင်းပါးရေးထားတာပါ။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ဆန်ကိုအဓိက အစားအစာအဖြစ် စားသုံးသူပေါင်း ကုဋေများစွာရှိရာ ဆန်တွင် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သော အာဆင်းနစ်ဓာတ် ပါရှိနေတတ်သည့်အတွက် နိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့များက ဆန်တွင်အာဆင်းနစ်ဓာတ်ကိုထိန်းချုပ်သွားဖို့ ပထမအကြိမ် သဘောတူကြကြောင်း ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂက သတင်းထုတ်ပြန်သည်တဲ့။
” သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ကနေ အာဆင်းနစ်ဖြစ်လာပါတယ်၊ မြေဆီလွှာညစ်ညမ်းမယ် ရေထုညစ်ညမ်းမယ် ဒီမြေဆီလွှာမှာ ပျိုးပင်တွေစိုက်ပြီး ဒီရေကိုတိုက်ကျွေးမယ်ဆိုရင် ဒီစပါးပင်တွေထဲမှာ ညစ်ညမ်းမှုတွေပါသွားပြီး စပါးစေ့ ဆန်စေ့တွေမှာ အာဆင်းနစ်လို့ခေါ်တဲ့ အဆိပ်တစ်မျိုးပါသွားပါတယ်၊ ဒီအာဆင်းနစ်ကို ရေရှည်စားမိရင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားပြီး သေဆုံးနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာ အစိုးရ အဖွဲ့က သတိထားဆောင်ရွက်တာမျိုး မလုပ်ပေးဘူးဆိုရင် ပြည်သူတွေ ထမင်းစားရင်း အဆိပ့်သင့်နေမှာပါ” ဟု ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ အစားအသောက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းစင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှုး အိန်ဂျယ်လီ ကာထရစ်ရှာ ကပြောပြတယ်တဲ့။
အာဆင်းနစ်ကို ကမ္ဘာ့မြေသားလွှာများတွင် သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရပြီး အာရှတိုက်တွင် အာဆင်းနစ်ထုထည် အသိပ်အသည်းဆုံးဖြစ်ရာ ဆန်စပါး အဓိကစိုက်ပျိုးသည့် နိုင်ငံများကလည်း အာရှတိုက်တွင်ပင်တည်ရှိနေ ပါသည်။
စပါးစိုက်ခင်းများသို့ ရေပေးသွင်းရာတွင် မြေအောက်ရေကို အသုံးပြုတတ်ကြပြီး ထိုရေထုထဲတွင် အာဆင်းနစ် ဓာတ် သိပ်သည်းစွာပါဝင်နေတတ်သည်။ အာဆင်းနစ်ပါဝင်သော ရေကိုသောက်သုံးသော စပါးပင်တွင်လည်း အာဆင်းနစ်ဓာတ်ပါဝင်သွားကာ ဆန်တွင်လည်း အာဆင်းနစ်ဓာတ်ပါဝင်သွားလို့ ထမင်းချက်စားကြသူများ အဖို့ များများစားလေ များများအဆိပ့်သင့်လေ ပင်ဖြစ်ကာ အချိန်ကြာမြင့်လာသောအခါ ကင်ဆာဝေဒနာကို ခံစားကြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဆောင်းပါးမှာရေးထားပါတယ်လေ။
အင်း ကျုပ်တို့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ထမင်းမှ အဓိကအစာဖြင့် မစားသင့်ရင် ဘာသွားစားရတော့မှာလဲဗျာ။
ကမ္ဘာမြေဖျားနာနေခြင်းမှ လူသားတွေဆီကို တစ်စတစ်စ ကူးဆက်လာလေပြီလို့ ကောက်ချက်ချရင်း
“သေ ပြီ ဆ ရာ “ ဟုသာ အောပစ် လိုက်ချင်တော့တာ ပါဘဲဗျာ။
ခင် ခ has written 458 post in this Website..
View all posts by ခင်ခ →
ထမင်းစားရမှ စားရတယ် အောက်မေ့တာ။
ခင်ဇော်တို့ကမှ ငိုရင်တောင် ထိန်းငိုလို့ ရနိုင်သေးတယ်။
အခြားနိုင်ငံတွေက သဘာဝပတ်ဝင်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကို လုပ်ချင်လုပ်လာနိုင်ပေမယ့် ဒီနိုင်ငံကတော့ သိတော်မူကြတဲ့အတိုင်း ပြည်သူတွေကိုဥပေက္ခာပြုနိုင်မှု စံနှုန်းအရ ဒီနိုင်ငံထဲက သူတွေက ပိုပြီးတော့တောင် ချုံးပွဲချငိုရမှာပါဗျ။
alinsett (gazette) says:
ဘာဘာ ဘာမှကို မပြောတတ်တော့ပါဘူးးးး
Cooking tips to possibly lessen risk of arsenic in rice
October 03, 2012|By Monica Eng, Tribune Newspapers
Last month rice lovers got some bitter news.
The U.S. Food and Drug Administration and Consumer Reports released studies showing “worrisome” levels of cancer-causing arsenic in many popular rices and rice products.
Within days some doctors called for limiting rice consumption, especially in children. Consumer Reports suggested capping weekly servings to less thanacup of cooked rice for kids and about 11/2 cups of cooked rice for adults. And the Illinois Attorney General’s office, which conducted its own tests on infant rice cereal, suggested watching how much rice cereal parents feed to babies.
The FDA, however, stopped short of advisingacap on rice consumption or evenalimit on arsenic residues in rice. But it did say that the levels found have prompted the agency to prioritize further testing of about 1,000 more samples by the end of the year in order to come up with “science based” recommendations.
Critics of the Consumer Reports recommendations are quick to point out that no large-scale epidemiological study has yet isolated rice in arsenic asasource of cancer in humans. But no such study has ruled it out either. And all acknowledge that inorganic arsenic is classified asaClass A carcinogen, making high consumption levelsabad idea.
For those who don’t eat much rice, this issue may be small potatoes. But Asian and Latino foods lovers and the nation’s growing legions of gluten-free eaters depend on rice foralarge part of their diet. So what are those groups supposed to do, especially those who feed kids, until the FDA comes out with official rice recommendations?
We talked to experts for some advice.
Rinse your rice thoroughly. The FDA cites several studies indicating that “thoroughly rinsing rice until the water is clear (four to six changes of water) reduced the total arsenic content by up to approximately 25-30 percent.”
Check your municipal water report. “Make sure your local water supply does not have high levels of arsenic,” says John Duxbury of Cornell University, who studies arsenic and rice. “If you do have high levels, washing can make it worse. But if you are under 10 parts per billion, it should help.”
Cook and drain your rice sort of like pasta. “We say to use about6parts water to 1 part rice,” says Michael Hansen,asenior staff scientist at Consumer Reports. “And then drain off the water after it’s done.” The FDA says that studies show rinsing and cooking in excess water can reduce total arsenic levels by 50 to 60 percent. “However, it should be noted that for enriched rice, rinsing will also likely reduce the amount of added nutrients,” the agency said.
Choose aromatic rices. For those who are already fans of Indian basmati or Thai jasmine rices, the news is not so bad. According to the hundreds of recently released test results, aromatic rice varieties show the lowest levels of inorganic arsenic. Imported basmati and jasmine rices showed about half to one-eighth the level of arsenic as regular rices grown in the Southern U.S.
Consider limiting brown rice consumption. Fromanutritional and fiber standpoint, brown rice is tops, but because its bran remains intact it can also hold on to higher levels of arsenic, according to test results. Are the nutritional benefits worth the arsenic load? Hard to say at this point. But some test results indicate that brown rice from California and India have much lower levels of arsenic than brown rice from Southern U.S. states. For now, they may be the best choice.
Choose California. Of the domestic rices tested by Consumer Reports, California rices had lower levels of arsenic than those in other states. FDA rice results also indicated that some U.S. rice had lower levels of arsenic, but the data it released to the public did not specify states of origin.
Be careful when feeding babies rice cereal and rice milk. Illinois Attorney General Lisa Madigan’s office conducted tests of rice cereals for babies that she announced all contained inorganic arsenic. Gerber recently releasedastatement announcing it now sources its baby cereal rice only from California. Still Consumer Reports advises that children do not drink rice milk and that infant rice cereal (1/4 cup) be served no more than onceaday.
ကိုကြီးခ ဒီကိစ္စကြီးက ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးနော်။ တစ်မျိုးသားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်နေတဲ့ အမျိုးသားရေးကိစ္စကြီး။ အာဆင်းနစ် ဆိုတာ ဘာလဲ။ မြေကြီးထဲမှာ အရင်ကတည်းက ရှိနေတာလား။ ဓာတ်မြေသြဇာသုံးစွဲလို့ ဖြစ်တာလား။ မြန်မာပြည် နယ်မြို့တွေအလိုက် အ၀ီစိရေ စတဲ့ ရေတွေမှာ အာဆင်းနစ် ပါဝင်နှုန်းကို ဘယ်ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ စမ်းသပ်မလဲ။ အရေးကြီးကိစ္စကြီးကို တပ်လှန့်လိုက်တဲ့ ကိုကြီးခကိုလည်း ကျေးဇူးတင်မိကြောင်းပါ။
အထက်က သဂျီး ရဲ့ ကွန်မင့်ကလည်း ၂၀၁၂ နှစ်ကုန်ပိုင်းကသတင်းဆိုတော့ မြန်မာပြည်အတွက်ကတော့ နောက်ကျတယ်လို့ ပြောလို့ကို မရဘူး။ ပြီးတော့ သတင်းစာကလည်း Tribune ဆိုတော့လေ။ မြန်မာလို ဖတ်ရမှ အားရှိပါးရှိ ဖြစ်တဲ့လူတွေအတွက် ကြော် တတ်သလောက် ပြန်ပေးလိုက်တယ်နော်။
– ပြီးခဲ့သောလက ဆန်ကြိုက်သူများ သတင်းဆိုးတစ်ပုဒ် ကြားသိခဲ့ရသည်။
– ခေတ်ပေါ်ဆန်နှင့် ဆန်ထွက်ပစ္စည်းများတွင် ကင်ဆာဖြစ်စေသော အာဆင်းနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုသည် စိုးရိမ်စရာအဆင့်ထိ ပြသနေကြောင်း U.S FDA မှ အစီရင်ခံစာတွင် ပါရှိသည်။
– ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပင် ဆရာဝန်များက ဆန်စားသုံးမှုကန့်သတ်ရန်၊ အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များ ဆန်စားသုံးမှု ကန့်သတ်ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ စားသုံးသူများ အစီရင်စာတွင် အကြံပြုထားသည်မှာ ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်၏။ အပတ်စဉ်စားသုံးမှုအနေဖြင့် ကလေးများအား ထမင်း (ချက်ပြီးသားဆန်) ကို ကော်ဖီပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစာထက်လျှော့စားရန်နှင့် လူကြီးများကမူ ၁၁/၂ ကော်ဖီပန်းကန်လုံးစာမျှသာ စားရန် အကြံပြုထားသည်။ ကလေးများ ဆန်စားသုံးမှုကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်သော အီလီနွိုက် ရှေ့နေချုပ်၏ ရုံးမှ အကြံပြုသည်မှာ စောင့်ကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ မိဘများက ကလေးများအား ဆန်ပမာဏမည်မျှ ကျွေးသည်ကို စောင့်ကြည့်ရမည်။
– မည်သို့ဆိုစေ FDA သည် ဆန်စားသုံးမှုကို ကန့်သတ်ရမည်၊ သို့မဟုတ် ဆန်ထဲပါဝင်သော အာဆင်းနစ်ဓာတ် အကြွင်းအကျန်ကို ထိန်းချုပ်ရမည်ဟု အကြံဆက်မပေးဘဲ ကိုယ်ရှိန်ပြန်သတ်သည်။ သို့သော် ယခုနှစ်ကုန်အထိ ဆန်နမူနာ ၁၀၀၀ ကျော် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ရေးကို ဦးစားပေးသတ်မှတ်ရန် ယခုတွေ့ရှိချက်က ဌာနအား လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ကြောင်း FDA မှ ပြောကြားသည်။ သို့မှသာ သိပ္ပံနည်းကျ အကြံပြုချက် ထွက်ပေါ်နိုင်မည်။
-စားသုံးသူများ အစီရင်စာ ဝေဖန်ရေးသမားများက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထောက်ပြခဲ့သော အချက်မှာ ရောဂါဘယဆိုင်ရာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လေ့လာမှုတွင် ဆန်ထဲပါဝင်သော အာဆင်းနစ်ဓာတ်ကို လူသားများ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှု၏ အရင်းခံအဖြစ် သီးခြားခွဲထုတ်ပြခြင်း ယခုချိန်ထိ မရှိသေးကြောင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ထိုသို့သော လေ့လာမှုသည်လည်း စီရင်ချက်မချနိုင်ပါ။ အားလုံး အသိအမှတ်ပြုထားပြီးသား ကိစ္စမှာ ဇီဝမဟုတ်သော အာဆင်းနစ်သည် Class A ကာစီနိုဂျင်ဖြစ်ပြီး မြောက်များစွာ စားသုံးခြင်းသည် မှန်ကန်သောအသိ မဟုတ်ချေ။
– ဆန်များများ မစားသူများအတွက် ယခုသတင်းသည် အသေးအမွှားလေးသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အာရှနှင့် တောင်အမေရိကအစာ ကြိုက်သူများနှင့် နိုင်ငံတွင်းမှ gluten-free စားသောလူအုပ်သည် သူတို့၏ အစားအစာအတွက် ဆန်ကို အများဆုံး မှီခိုထားကြသည်။ ထို့ကြောင့် FDA မှ တရားဝင်စာ မထွက်ခင်အထိ ဆန်စားသုံးသူများ၊ အထူးသဖြင့် ကလေးများအား ကျွေးမွေးနေသူများအတွက် မည်သို့ အကြံပေးကြမည်နည်း။
– အကြံတစ်ချို့ရရန် ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် စကားပြောခဲ့ကြသည်။
— ဆန်ကို ရေ သေသေချာချာ ဆေးပါ။ FDA သည် လေ့လာချက်ပေါင်းများစွာမှ တိုက်ရိုက်ကိုးကားပြီး ပြောခြင်းဖြစ်သည်။ လေးကြိမ်မှ ခြောက်ကြိမ်အထိ ရေကြည်သွားသည့်တိုင်အောင် ဆန်ကို သေသေချာချာ ရေဆေးခြင်းသည် အာဆင်းနစ် စုစုပေါင်းပါဝင်မှု၏ ၂၅% မှ ၃၀ % အထိ လျှော့ချပေးသည်။
— မြူ နီစီပါယ် ရေ အစီရင်ခံစာကို စစ်ဆေးပါ။ သင်၏ဒေသတွင်းရေသည် အာဆင်းနစ်ဓာတ် မြင့်မားစွာ ပါမနေဖို့ သေချာနေပါစေ ဟု အာဆင်းနစ်နှင့်ဆန် လေ့လာနေသော Cornell University, မှ John Duxbury က ပြောသည်။ အကယ်၍သာ ရေထဲ အာဆင်းနစ်ဓာတ် မြင့်မားစွာပါလျှင် ဆန်ကိုရေဆေးခြင်းသည် ပိုဆိုးဖို့ရာသာရှိသည်။ ရေထဲတွင် အာဆင်းနစ်ဓာတ် သန်းတစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံပါလျှင် အဆင်ပြေပါသည်။
— အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက်ကဲ့သို့ သင့်ဆန်ကို ချက်ပြီး ရေစစ်ပါ။ (ထမင်းရည်ငှဲ့ပါ) ။ ဆန်တစ်ဆအတွက် ရေခြောက်ဆ သုံးပါ။ ချက်ပြီးလျှင် ရေများစစ်ချပါ ဟု အဆင့်မြင့်ဝန်ထမ်း သိပ္ပံပညာရှင် Michael Hansen ကဆိုသည်။
— FDA ကမူ ဆန်ကိုရေဆေးခြင်း၊ ထမင်းရည်ငှဲ့ခြင်းတို့သည် ဆန်ထဲ အာဆင်းနစ်ဓာတ် ပါဝင်မှုကို ၅၀ မှ ၆၀% အထိ လျှော့ချပေးနိုင်သည်၊ သို့သော် သိထားသင့်သည်မှာ ဆန်ကို ရေဆေးခြင်းဖြင့် အာဟာရဓာတ်များ လျော့ကျနိုင်သည် ဟု ဌာနမှဆိုသည်။
— ရနံ့မွှေးဆန်ကို ရွေးချယ်ပါ။ အိန္ဒိယ basmati သို့မဟုတ် ထိုင်း စံပယ်ပန်းဆန်များကို အားပေးသူများအတွက် ထိုသတင်းသည် သိပ်မဆိုးလှချေ။ ရာပေါင်းများစွာသော ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးမှု အဖြေလွှာများအရ ရနံ့မွှေးဆန် အမျိုးကွဲပေါင်း များစွာသည် ဇီဝမဟုတ်သော အာဆင်းနစ်ဓာတ် ပါဝင်မှု အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သည်။ တင်သွင်း basmati ဆန်နှင့် စံပယ်ပန်းဆန်တို့သည် US တောင်ပိုင်းတွင်စိုက်သော ပုံမှန်ဆန်များနှင့်ယှဉ်လျှင် အာဆင်းနစ်ပါဝင်မှု တစ်ဝက်မှ ရှစ်ပုံတစ်ပုံအထိသာရှိသည်။
— ဆန်လုံးညို စားသုံးမှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့ စဉ်းစားပါ။ အာဟာရဓာတ်နှင့် အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှု ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ဆန်လုံးညိုသည် ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်။ သို့သော် ၄င်း၏ ဖွဲနုသည် ပကတိအတိုင်း ရှိနေရာ ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ချက် အဖြေလွှာအရ အာဆင်းနစ် မြင့်မားစွာ ပါနေနိုင်သည်။ အာဟာရ ကြွယ်ဝခြင်းအတွက် အာဆင်းနစ်ပါဝင်ခြင်းသည် တန်ပါ၏လော။ ထိုအချက်တွင် ပြောရခက်လှသည်။ သို့သော် ကာလီဖိုးနီးယားနှင့် အိန္ဒိယမှ ဆန်များသည် US တောင်ပိုင်းမှ ဆန်လုံးညို များထက် အာဆင်းနစ် ပါဝင်မှု များစွာလျော့နည်းသည်ဟု အချို့ဓာတ်ခွဲခန်း အဖြေလွှာများက ညွှန်ပြခဲ့သည်။ လောလောဆယ်အတွက်မူ ကာလီဖိုးနီးယားနှင့် အိန္ဒိယမှ ဆန်များသည် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ချက် ဖြစ်နိုင်သည်။
— ကာလီဖိုးနီးယား ဆန်ကို ရွေးချယ်ပါ။ စားသုံးသူအစီရင်ခံစာအရ ပြည်တွင်းဆန် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုတွင် ကာလီဖိုးနီးယားဆန်သည် အခြားပြည်နယ်မှ ဆန်များထက် အာဆင်းနစ်ပါဝင်မှု နည်းပါး၏။ FDA အဖြေလွှာတွင်လည်း US မှ ဆန်တချို့သည် အာဆင်းနစ်ပါဝင်မှုနည်းကြောင်း ညွှန်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် မူလထွက်ရှိရာ ပြည်နယ်ကိုမူ မဖော်ပြခဲ့ပေ။
— ကလေးများအား ဆန်နှင့် ဆန်နို့ တိုက်ကျွေးလျှင် ဂရုစိုက်ပါ။ အီလီနွိုက် ရှေ့နေချုပ် လီစာမက်ဒင်ဂန် ၏ ရုံးသည် ကလေးငယ်များအတွက်ဆန် စမ်းသပ်မှုများ စီမံခန့်ခွဲရသည်။ သူမ ကြေငြာခဲ့သည်မှာ အားလုံးသော ဆန်တွင် ဇီဝမဟုတ်သော အာဆင်းနစ်ဓာတ် ပါဝင်နေကြောင်းပင်။ မကြာသေးခင်က ဂါဘာမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ကလေးသူငယ်များအတွက် ဆန်ကို ကာလီဖိုးနီးယားဆန်သာ ကျွေးသင့်သည်ဟူ၏။ စားသုံးသူများ အစီရင်ခံစာမှ အကြံပေးထားသည်မှာ ကလေးများ ဆန်နို့ မသောက်ရန်၊ ကလေးများအား ကော်ဖီပန်းကန်လုံး ၄ပုံ၁ပုံစာ ထမင်းကို တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီး မကျွေးရန် အကြံပေးထားသည်။
အဲဒီထဲက gluten-free ဆိုတာ ကြော်လည်း မသိဘူး။ ပြီးတော့ rice milk ဆိုတာ ဘာလဲ မသိဘူး။ နို့ထမင်းကို ပြောတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ ဆန်ကို နို့ဖောက်တာလား။
ဘာသာပြန်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ မပြုံး။
လိုတဲ့နေရာ ကွက်လပ် ဝင်ဖြည့်ပေးတတ်တဲ့ စိတ်ရှိသူ တွေ ရွာထဲ မှာ ရှိနေတာ သိပ်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတာဘဲ။ :-))
သိသမျှ ကတော့ “gluten-free” ဆိုတာ ဂျုံလို စေးကပ်တဲ့ အနှံ တွေ နဲ့ လွတ်အောင် လုပ်ထား တဲ့အစားအစာ တွေ ကို ပြောတယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။
အဲလို ဟာတွေ နဲ့ မတည့်တဲ့ လူတွေ ရှိပါတယ်။
“rice milk” ဆိုတာကတော့ တိရိစ္ဆာန်နို့ တွေ ကို အစားထိုးဖို့ ဆန်ညို ကနေပြီး ကြိတ်ယူတာကို ခေါ်တယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။
သတ်သတ်လွတ်သမား တွေ နဲ့ တိရိစ္ဆာန်နို့ တွေ နဲ့ မတည့်သူတွေ သုံးကြပါတယ်။
အခု ကိုခင်ခ တင်ထားတာ ကို ကြည့်ရတာ အမေရိက က စိုက်တဲ့ ဆန် ( long grain လို့ နာမည်ကြီးတာဘဲ) တွေမှာ တွေ့တာကို ပြောတယ်ထင်မိတယ်။
သူက ဘယ်လိုဆန်၊ ဘယ်နိုင်ငံ ပြောလဲ မထားဘူးထင်ရဲ့။
အဓိက ရှောင်ဖို့ ပြောတာက အသက်ငယ်တဲ့ ကလေးတွေ နဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင် တွေမို့ သာမာန် လူခံနိုင်တဲ့ ပမာဏ ရှိနေပါသေးတယ်။
တကယ်တော့ အဲဒီ အမေရိက က ဆန်တွေ က တော်တော် လုပ်နေတာမို့ နိုင်ငံတွင်း စားဖို့ သူများ ဆီက ဆန် တွေ ကို သိပ်ပြီး အားထားစရာ လိုမယ်မထင်ဘူး။
ဒါပေမဲ့ အိန္ဒိယ နဲ့ ထိုင်း ဆန်တွေ ကို တော့ လုပ်မှာပါ။ အဲဒီတွေမှာ အာဆင်းနစ် ပါဝင်မှုနည်းတယ်လို့ လဲ ပြောတာကိုး။
သူတို့ နိုင်ငံ က တစ်ချို့ ဒေသ တွေ ရဲ့ ရေ ထဲ မှာ ကို အဲလို သတ္တုဓာတ်တွေ ပါနေတာ တွေ့တယ် လို့လဲ ကြားဖူးတယ်။
ဆန်ထဲ ကို စိုက်တဲ့ ရေက ဓာတ် တွေ ဝင်တာလို့ ပြောတာဘဲ။
ဂျုံ လို အပင် တွေ က ဆန်လောက် အဲဒီဓာတ်တွေ ကို မစုတ်ဘူး တဲ့။
ဆန် က ဘယ်နိုင်ငံတွေကလဲ အသေအချာ မပြောထားတော့ မြန်မာပြည် က စိုက် တဲ့ ဆန် တွေ သူတို့ ဆီ မရောက်လောက်ပါဘူး မျှော်လင့်လို့ ရပါသေးတယ်။
နောက်ပြီး မပြုံး ဘာသာပြန်ထား တဲ့ “အားလုံးသော ဆန်တွင် ဇီဝမဟုတ်သော အာဆင်းနစ်ဓာတ် ပါဝင်နေကြောင်းပင်။” ဆိုကထဲ က ဟိုးအစ ထဲ က သာ အဆိပ်သင့်ရင် ကျွန်မတို့ ဘိုးဘွား တွေ က စပြီး ဖြစ်လာရမှာပါ။
လူ ကို သိပ်ပြီး မထိခိုက်နိုင်တဲ့ ပမာဏ မို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ဘယ် အစားအစာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဓာတုဓာတ် အနည်းအများပါမယ် ထင်ရဲ့။
တလောက အာလူး တွေ ထဲ မှာ လဲ မြေဆီ က အဆိပ်ဓာတ် တွေ ပါတယ် ကြားမိလိုက်သေးတယ်။
ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ စားနေတဲ့ အစာ တွေ ကို စစ်ဆေးဖို့ ကတော့ တိုင်းပြည်ကို စီမံခန့်ခွဲသူများမှာ တာဝန်ရှိတာ၊ သူတို့ တာဝန် မသိတာ၊ ကျေအောင်မလုပ်နိုင်တာ တွေကတော့ မရိုးနိုင်တဲ့ ပုံပြင်တွေ များလှပါပြီ။
ပြောရရင် အဲဒီ အာဆင်းနစ် ထက် ပိုပြီး ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ ဓာတုဆေး တွေ က အစာ တွေထဲ မှာ ရှိနေတာ မြင်နိုင်တဲ့ လက်တကမ်း မှာပါ။
မြင်လဲ မြင် သိလဲ သိကြပါတယ်။
ဆန် ကို တနည်း မမြင်ရ တာတွေ ကို တွေးပြီး စိတ်ပူနေမဲ့အစား လက်တွေ့ မြင် သိ နေတဲ့ အစာတွေ ကို ရှောင်ပြီး စားကြတာက ပိုပြီး လက်တွေ့နဲ့ နီးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်ရာ ရောက်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့မြေသားလွှာများတွင် သဘာဝအတိုင်းတွေ့ရပြီး အာရှတိုက်တွင် အာဆင်းနစ်ထုထည် အသိပ်အသည်းဆုံးဖြစ်ရာ ဆန်စပါး အဓိကစိုက်ပျိုးသည့် နိုင်ငံများကလည်း အာရှတိုက်တွင်ပင်တည်ရှိနေ ပါသည်။
ဝီကီ အရတော့ အာဆန်းနစ် သိပ်သည်းရာ ဒေသတွေ က အမေရိက အနောက်ပိုင်း ၊ တောင်အမေရိက အောက်ပိုင်း အာဂျင်တီနာ ချီလီ၊ မှာ အများဆုံး ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ၊ မွန်ဂိုလီးရား၊ ဗီယက်နန် နဲ့ ထိုင်း တို့မှာ နဲနဲ ရှိတာ တွေ့တာဘဲ၊
မြန်မာ နဲ့ အိန္ဒိယ လွတ်တယ် ကိုခ ရဲ့။
ဘူမိဆရာ ကျောက်စ် ဆိုပိုပြီ နားလည် မယ်ထင်ရဲ့။
Paing Lay says:
:byee: :byee: :byee:
အောင်မယ်မင်း ထမင်းမှမစားရရင်ဘာသွားစားရမာဒုန်း အရပ်ကတို့ရဲ့ :byee: ထမင်းမစားပဲက တရက်ထက် ပိုပြီးမနေနိုင်ဘူးပဲကိုးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး အောင်မယ်ငိ့
ဗမာပြည်နေသူတွေ အတွက်တော့ ထူးပြီးကြောက်နေစရာလိုမယ်မထင်ပါဘူး….
ကင်ဆာကမှ ဘယ်တော့ဖြစ်မယ်မသိ၊ ဖြစ်ပြီးရင်တောင် တော်တော်လေးတော့ နေရအုံးမှာ..
အချိန်မရွေး ဓါတ်လိုက်သေနိုင်တာလောက် မဆိုးဘူးဆိုရမယ်
ကင်ဆာဖြစ်မှာ သိနေရက်တောင် ဆေးလိပ်ကိုသောက်နေသေးတာပဲ